Macallin Frank Lampard oo ka warbixiyay xaaladda N’Golo Kante iyo mustaqbalkiisa… (Miyuu taam u yahay kulanka Aston Villa?) – Gool FM
Macallin Frank Lampard oo ka warbixiyay xaaladda N’Golo Kante iyo mustaqbalkiisa… (Miyuu taam u yahay kulanka Aston Villa?)
(London) 20 Juun 2020. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa dhowaanahan ka walwalsanaa xaaladda caafimaad ee xiddigooda N’Golo Kante iyo mustaqbalkiisa.
Tababaraha kooxdaas ee Frank Lampard ayaa tilmaamay in Kante uu caafimaad ahaan taam yahay, sidoo kalena uu diyaar u yahay ka qayb qaadashada kulanka ugu soo horreeya ee ay Blues ciyaareyso.
Xiddiga reer France ayaa tababarka Chelsea ka baxay horraan kaddib walaac uu ka muujiyay xanuunka faafa ee coronavirus, balse waxa uu hadda tababarka ku soo laabtay isagoo fayoobi qaba.
“Waxay ahayd arrin dhab ah, anigana waan u beer jilcay” ayuu yiri Lampard.
“Waxa uu doonayay inay u caddaato sida loo shaqeynayo. Hadda muddo ayuu tababarka la qaadanayaa, waxaana uu taam u yahay sida ciyaartoyda kale” ayuu hadalkiisa ku sii daray xiddigii ugu goolasha badnaa taariikda Chelsea.
Dhanka kale, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay jiray hadal heyn ku aaddan in Kante la iibin doono xagaagan, waxaana mar kale arrimahaas ka hadlay macallinka Blues.
Lampard ayaa xiddigii hore ee Leicester City ku tilmaamay mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan dunida ee ka ciyaara khadka dhexe, waxaana uu hadalkiisa sii raaciyay inuu xiddigan muhiim u yahay qorshe-ciyaareedkiisa, sidaas darteedna uu baaqi ku sii ahaan doono Stamford Bridge.
Ciyaartoyda uu heshiiskoodu sii dhacayo ee Pedro iyo Willian ayuu xaqiijiyay Lampard inay diyaar u yihiin ciyaarta ay Aston Villa booqan doonaan Axadda, inkastoo uusan heli doonin Fikayo Tomori iyo Callum Hudson-Odoi kuwaasoo dhaawacyo qaba.
"Way adag tahay inaan horyaalka ku guuleysanno" - Pique
"Waxaan la yaabaa sababta uu Gareth Bale wali ula joogo Real Madrid!" - Dimitar Berbatov